Wasiir ka hadlay Internet-ka ka maqan Koonfurta Soomaaliya
MUQDIOSHO, Soomaaliya - Shacabka ku dhaqan Koonfurta Soomaaliya ayaa saakay ku waaberiistay Internet-ka oo go'an, taasoo ku keentay shaqooyinka jahwareer xooggan, maadaama malaayiin qof aysan shaqeyn karin adeeggan la'aantiisa.
Shirkadaha bixiya Internet-ka ayaa fariimo ay u direen macaamiishooda ku sheegay inay jirto cilad farsamo, islamarkaana ay ku howlan yihiin xalinteeda, iyagoo aan sheegin waqtiga ay qaadan doonto maqnaashiyaha Internet-ka, oo laga cabsi qabo inay maalmo ama Isbuucyo qaadato.
Internet-ka ayaa ka yimaadan hal meel, oo dhamaan Shirkadaha isticmaalaan, taasoo ah Fiber Optic badda lasos marsiiyay oo gacanta ugu jira shaqsi gaar ah oo dalka keenay, iyadoo aan jirin tartan adeeggan dadka badan ku tiirsan yihiin.
Wasiirka Tiknoolojiyadda DF Eng Canshuur oo hadlay ayaa sheegay inuu la socdo ciladda, islamarkaana laga shaqeynayo sidii fiilo cable kale oo Internet ah lagu soo gelin lahaa Muqdisho, isagoo xusay in farsamada mudo kooban lagu soo afjari doono.
Bishii July ee sanadkan ayaa sidan oo kale la waayay Internet-ka, waxaana xiligaas kusoo beegan tahay waqtiga xiisadda siyaasadeed ay jirto, oo xilka laga qaadey Xasan Cali Khayre oo isagoo ku maqan Dhuusamareeb Baarlamanka kalsoonida kala noqday Xukuumadiisa.
Marka ay dalka ka jirto xisaadda siyaasadeed ama arin shacabka hadal hayaan, waxaa qadka ka baxa Internet-ka, waxayna arintan dad badan ku micnaayeen mid ku-tala-gal loo sameeyo, oo la doonayo in bulshadda indhahooda la isaga leexiyo.
Gobollada kale ee Puntland iyo Somaliland ayaan saameyn ku yeelan Internet la'aanta marwalba ka dhacda Koonfurta Soomaaliya, maadaama aysan isku meel kasoo qaadan Fiber Optic-ga dalka laga isticmaallo.
Soomaliya 02.07.2018. 13:40
Magaalada Caasimadda ayaa ahayd mudooyinkii ugu dambeeyay mid ay ka dhacayeen dilal qorsheysan oo...
Kenya oo ka jawaabtay eedeynta Dowladda Federaalka Soomaaliya
Afrika 28.02.2020. 14:34
Al-Shabaab oo dagaal kula wareegtay degmo katirsan Bakool
Soomaliya 11.06.2018. 15:04